Ekugqibeleni, wazisa umntwana wakho ekhaya esibhedlele. Kodwa yintoni enokuyenza nayo? Indlela yokunyamekela intsana emva kokubeleka? Iintsana zidinga ukunakekelwa okhethekileyo. Kule nqaku, uya kufunda indlela kunye nokwenza ntoni.
Igumbi kunye nefenitshala yintsana.
Igumbi apho umntwana wakho uya kuhlala khona kufuneka abe ngomoya ococekileyo nongcolileyo. Ngoko ke, ukucocwa kwamanzi imihla ngemihla, kwaye ngelixa uqhuba umntwana kufuneka uwathathe kwelinye igumbi ukwenzela ukuba ungabamba ubanda ebusweni. Ikhefu kufuneka lisuswe kwifestile kunye nomnyango. Umqulo kunye ne-mattress kufuneka ukhethwe ngokunyanzelekileyo kwaye kunzima.
Kukulungele ukuba netafile eguqukayo eyahlukileyo. Ingaba iingubo ezifakwe kumntwana, amakhishithi kunye ne-diapers - ezifudumeleyo ezincinci, i-diapers kunye ne-diapers. Ukuba akukho thuba lokuthenga itafile enjalo, ngoko nayiphi na enye, ebhaliweyo, iya kwenza. Kule meko, phambi kokuba uxoxise umntwana, itafile kufuneka ifakwe kunye neoli ekhethekileyo yeoli. Emva kokuba kusetshenziswe kuyakufuneka ukuba ikhutshelwe i-disinfected ngokupheleleyo.
Iilwimi ezinokufuneka ube nazo ngexesha lokukhutshwa esibhedlele, ziquka ezi zinto zilandelayo: i-sliders kunye neerinki - malunga neesibhozo ezilishumi elinesibhozo, ezilishumi ezilishumi elinesibini, i-diapers ezincinci (ikotoni) malunga neenxalenye ezingamashumi amabini anesine, uninzi uya kulufuna i-diapers; idiapers, i-diapers ezifudumeleyo (flannel) ziza kufuna iziqwenga ezilishumi elinambini, iingubo ezifudumeleyo kunye nezimbini ezincinci.
Ngaphambi kokuba ugqoke umntwana zonke iilinen kufuneka zihlanjwe kwaye zenziwe ngeesinyithi ezishushu kumacala omabini.
Iinkqubo zasekuseni zentsana.
Ukuqala, uhlambe ngobumnene ubuso bomntwana ngamanzi abilisiwe okanye isisombululo seepesenti ezimbini ze-boric acid (gcoba ngolu hlobo lulandelayo: kwelinye iglasi lamanzi abilisiwe uphula elinye ithispoon ye-boric acid). Emva kokuhlamba ngesisombululo esifanayo, susa ngokukhawuleza iindlebe, ngoko kufuneka uqinisekise ukuba isisombululo asifumani ngaphakathi kwinqwaba yomlomo. Amehlo omntwana ahlambulukile ngokucocekileyo ngeebhola zepotton eziyinyumba. Ngaphambi kwenkqubo, kufuneka bahlanjululwe kwisisombululo se-furacillin okanye i-manganese. Iliso ngalinye kufuneka lisuswe ngebhola ehlukileyo, ukusuka kwikona yangaphandle kwiso kwintonga. Isisombululo se-furacillin kulula ukuyithenga ku-pharmacy (1 ukuya ku-5000), i-permanganate ye-potassium inokuhlanjululwa ngokuzimela, ithulule i-crystals ngamanzi amancinci, igxininise ize ichithwe ngokupheleleyo, kwaye umbane omnyama obangelwayo uthelelwa emanzini abilisiwe ukwenzela ukuba isisombululo sembala ebomvu ebomvu sifumaneke.
Impumlo yengane yakho ihlambuluke ngokucocekileyo ngeboya yeconta, ifakwe kwioli ye-vasel oyinyumba. Siyaqinisekisa kwakhona ukuba i-marigolds kwiimbambano kunye nemilenze ihlala imfutshane ngokukhawuleza, ngaphandle koko umntwana angakwazi ukuziqhayisa.
Iintsana zinezifo ezincinci kwaye zisengozini. Ukuba ukunyamekela oko kuyiphutha, ngoko kuyayeka ukwenza umsebenzi walo wokukhusela ngokuqhelekileyo. Umntwana kufuneka ahlambe imihla ngemihla ngamanzi abilisiwe. Kwithuba lokuqala emanzini, unokongeza i-manganese, kunye nelihlo. Ukuhlamba umntwana ngesepha kuyimfuneko kaninzi kuninzi ngeveki - isepha igalela isikhumba. Ukuhlamba kunjengolu hlobo: ngesandla sakho sobunxele, sisekela intloko yentsana ukuze amanzi angangeni ezindlebeni, kwaye okulungileyo malunga nemizuzu emibini amanzi amanzi kumanzi. Ukuhlamba umntwana kunye nesepha kugqitywa ngokuhlamba umntwana ngamanzi abilisiwe. Xa simkhulule umntwana, siyifaka kwisitya sokuhlamba kwaye siyifake kwitafile eguqukayo. Etafileni, siyilitye nge-diaper kwaye siyidlulisele kwindawo elomileyo, ekufuneka ilungiselelwe kwangaphambili. Yonke imibhankaso elukhumbeni (intamo, ukuvuthwa, ukuxhamla) emva kokuhlamba ulusu lomntwana nge-cream cream okanye ibhotela. Ikhefu kufuneka ikhethwe ngoncedo lonyango lwezingane.
Ukunyamekela intambo yomlomo
Ngokwekukhutshwa esibhedlele, imvumba ihlala isomile, ngezinye izihlandlo iyanqumla kuyo, leyo iyawa phantsi kwayo. Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba inamba iqale ukuba yimanzi, kule meko ityunjwa nge-greenery. Ukuba ubona ukuba kukho inqwaba yesilonda, kufuneka ubonise umntwana ugqirha.
Kukho konke, inkambo ethi "Indlela yokunyamekela intsana emva kokubeleka" ingaqwalaselwa ngokugqibeleleyo.
Sling ngeesongo - iindlela zokugqoka
Ukuxothwa komntwana ekunceliseni
Inyanga yeshumi elinanye yobomi bomntwana
I-Recipe yokupheka abantwana abangaphantsi konyaka omnye
Ukuphuhliswa kwengqondo nomzimba womntwana
Nceda uqaphele, kukho iindlela ezininzi kunye nezindlela zokukhulelwa
I-Haircut yobuso obunzima
Ihlobo, ulwandle, ilanga, iCrimea: uphando lweelwandle zaseCrimea ezifanelekileyo
Ode ukuya ku-Odile: ukuqokelela i-makeup Yenza up Factory Dark Elegance ye-Swan
Kutheni kubakho ubuhlungu kunye nokuphazamiseka kwenzeka ngexesha lesini?
Jam kusuka kwi-strawberries kunye nama-oranges